မြန်မာသူငယ်ချင်းများအဖွဲ့ - အားလုံးအတွက် အနွေးထွေးဆုံး တစ်ခုတည်းသောနေရာ
Myanmar Calendar Download ZawGyi Font(32bit)
Download ZawGyi Font(64bit)
Our Donation Group
How to use Myanmar Fonts?
လက်ဆောင်ပေးမယ် chit lay
လက်ဆောင်ပေးမယ် Eaindra Tun
လက်ဆောင်ပေးမယ် ei thinzar phyoe
လက်ဆောင်ပေးမယ် gipsy love
လက်ဆောင်ပေးမယ် god particles
လက်ဆောင်ပေးမယ် HTUN HTUN
လက်ဆောင်ပေးမယ် Jacob Black
လက်ဆောင်ပေးမယ် kyaw paing zaw
လက်ဆောင်ပေးမယ် kyaw thu
လက်ဆောင်ပေးမယ် အက်ဒမင်များ ရွေးချယ်မှု
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မှန်တစ်ချပ်ကို ရိုက်ခွဲလိုက်တော့မည်။
လှပပြီး ကျန်းမာရေး ကောင်းစေရန် သောက်သင့်သည့် ဖျော်ရည်များ
အထိရောက်ဆုံး ကျား မ မရွေး ဆီကျ ၊ ပိန် ၊ ကျစ် စေနည်း
ကဲ FM အနေနဲ့ အသုံးပြုသူ မန်ဘာများအဆင်ပြေ စေဖို့
Gmail account ဖွင့်လှစ်ပေးမယ့်ကဏ္ဍလည်း စတင်လိုက်ပါပြီ . . . ။
FM ရဲ့ နောက်ဆုံး သတင်းများ
FM မှာ အကောင့်အသစ်လုပ်နည်း
Android ဖုန်းတွင်အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်မည့် FM Application
love have my love
Top News · Everything မြတ်နိုးခင် liked ချစ်သဲမောင်'s blog post မောင့်နှစ်လုံးသားငိုသံ4 minutes agoမြတ်နိုးခင် commented on ရာဟု's blog post မြတ်စွာဘုရား၏ ထားရှိခဲ့သောခြေတော်ရာများ"ကျေးဇူးပါ မှတ်သားခဲ့ပါတယ်"5 minutes agoမြတ်နိုးခင် liked ရာဟု's blog post မြတ်စွာဘုရား၏ ထားရှိခဲ့သောခြေတော်ရာများ7 minutes agoမြတ်နိုးခင် commented on တတိုင်းမွှေး's blog post စာမျက်နှာမဲ့...ဒိုင်ယာရီ"ငါဆုတောင်းပါတယ်
ရာသီခိုနေတဲ့နင့်…"8 minutes agoမြတ်နိုးခင် liked တတိုင်းမွှေး's blog post စာမျက်နှာမဲ့...ဒိုင်ယာရီ8 minutes agoစွမ်းမင်းပိုင် leftacomment for သက်လွင်ဦး (ပုလော)"ကျွန်တော်ပြန်လာလည်ခဲ့ပါတယ်အကို"11 minutes agoမြတ်နိုးခင် liked ရာဟု's blog post သတိ16 minutes agoမြတ်နိုးခင် commented on ရာဟု's blog post သတိ"တိန်!!!!!"16 minutes agoရာဟု posted blog postsသတိမြတ်စွာဘုရား၏ ထားရှိခဲ့သောခြေတော်ရာများအတ္တကိုဖော်ထုတ်ခြင်း18 minutes agoချစ်သဲမောင် မှ ဘလော့ပိုစ်အသစ် တင်ခဲ့ပါသည်။မောင့်နှစ်လုံးသားငိုသံချစ်သူ ကောင်းကင်က တိမ်ငိုသံဟာ အမြဲမဟုတ်ပေမယ့်ငါ့ရင်ကနင့်ကို…See More18 minutes ago 1
တတိုင်းမွှေး မှ ဘလော့ပိုစ်အသစ် တင်ခဲ့ပါသည်။စာမျက်နှာမဲ့...ဒိုင်ယာရီလမင်းကြီးကိုလိုက်ငေးလို့..ခုတော့ခလုပ်တိုက်မိပြီခြေထောက်ကမနာတတ်လို့ရင်ဘတ်ကနာပြလိုက်တာကဗျာတွေကမျက်ရည်စ…See More19 minutes ago 1
စွမ်းမင်းပိုင် commented on အဖြူရောင်နတ်သမီးလေး's group နတ်သက်ကြွေသူလေးများအဖွဲ့"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမရယ်ကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်သွားပါတယ်ဗျာမမကနတ်သမီးလေးကျွန်တော်က
နတ်သားလေးပေါ့"22 minutes agoစွမ်းမင်းပိုင် joined အဖြူရောင်နတ်သမီးလေး's groupနတ်သက်ကြွေသူလေးများအဖွဲ့ကဲဒီအဖွဲ့လေးကတော့နတ်သက်ကြွေပြီးနတ်ပြည်မှဆင်းသက်လာသူလေးများအဖွဲ့ပါနတ်သမီးတို့လိုပေါ့နော်ခ်ခ်See More23 minutes ago 12
စွမ်းမင်းပိုင် liked အဖြူရောင်နတ်သမီးလေး's group နတ်သက်ကြွေသူလေးများအဖွဲ့23 minutes agoAungmaw Maw posted songs play Zaw Paing (Comment) [High quality] play Track 06 - bophyu - chithtonephyaypar play Greeting Tear2 hours agoမြန်မာ DJ king postedastatus"https://www.youtube.com/watch?v=vIaH35-MLsk"8 hours ago 0
ထပ်ပြီးတော့ ... RSS
(တတိုင်းမွှေး က နိုဗင်ဘာလ 26, 2014 နေ့ 3:21am မှာတင်ခဲ့ပါတယ်) 1 Comment
(ရာဟု က နိုဗင်ဘာလ 25, 2014 နေ့ 10:28pm မှာတင်ခဲ့ပါတယ်) 1 Comment
လည်ပင်းညှစ်မည် မြတ်စွာဘုရား၏ ထားရှိခဲ့သောခြေတော်ရာများ
(ရာဟု က နိုဗင်ဘာလ 25, 2014 နေ့ 9:53pm မှာတင်ခဲ့ပါတယ်) 1 Comment
(1) အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘုံဘိုင်နယ်မြောက်ပိုင်း နဘဒ္ဒါမြစ်ထဲတွင် ခြေတော်ရာတစ်ဆူ(လက်ဝဲ)
(2) နဘဒ္ဒါမြစ်အထက် သစ္စပန်တောင်ထိပ်၌ ခြေတော်ရာတစ်ဆူ(လက်ဝဲ)
(3) အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ဥဒယာနာတိုင်း၌ ခြေတော်ရာတစ်ဆူ(လက်ဝဲ)
(4) ပါဋလိပုတ်မြို့… (ဆက်လက်ဖတ်ရှူ့မယ်) မောင့်နှစ်လုံးသားငိုသံ
(ချစ်သဲမောင် က နိုဗင်ဘာလ 25, 2014 နေ့ 9:19pm မှာတင်ခဲ့ပါတယ်) 1 Comment
ချစ်သူ ကောင်းကင်က တိမ်ငိုသံဟာ အမြဲမဟုတ်ပေမယ့် ငါ့ရင်က
နှလုံးသားမှာ အလွမ်းအိုင်ဖြစ်နေပါပြီ… (ဆက်လက်ဖတ်ရှူ့မယ်) HAPPY BIRTHDAY DO YOU
(နွယ် က နိုဗင်ဘာလ 25, 2014 နေ့ 1:47pm မှာတင်ခဲ့ပါတယ်) 1 Comment
(နွယ် က နိုဗင်ဘာလ 25, 2014 နေ့ 1:41pm မှာတင်ခဲ့ပါတယ်)2Comments
နင့်ဆိကခွင့်လွတ်မှုကို… (ဆက်လက်ဖတ်ရှူ့မယ်) ကျွန်မချစ်သူမွေးနေ့အတွက်ပါ
(နွယ် က နိုဗင်ဘာလ 25, 2014 နေ့ 1:37pm မှာတင်ခဲ့ပါတယ်)3Comments
မွေးနေ့အတွက် … (ဆက်လက်ဖတ်ရှူ့မယ်) အတ္တကိုဖော်ထုတ်ခြင်း
(ရာဟု က နိုဗင်ဘာလ 25, 2014 နေ့ 1:15pm မှာတင်ခဲ့ပါတယ်)2Comments
သောက်ဟဲ့ သောက်ဟဲ့ သူရာရည်
တောက်တဲ့ တောက်တဲ့ သူ့နာမည်
အော်မည်ပတ်ချွဲ ဥသြ ဥသြ
ငဲ့ကွက်ခြေကန်… (ဆက်လက်ဖတ်ရှူ့မယ်) ဘလော့ပိုစ့်တင်မယ်
အကောင်ဆုံး Wifi ၇ဲ. တည်နေ၇ာကိုပြသပေးသော Free Zone Wi-Fi app
အွန်လိုင်းခ၇ီးသည် က ဒေါင်းလော့ Zoneမှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပြန်စာ ကိုတော့ဦးရာမ ရေးခဲ့ပါတယ်။ (9 hours ago)3Replies
ခိုင်သားလေး က ကဗျာပျိုးခင်းမှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပြန်စာ ကိုတော့ရာဟု ရေးခဲ့ပါတယ်။ (10 hours ago)3Replies
ဒီတစ်​ခါ FM သယ်​ရင်​​ဒွေ အတွတ်​ Bagan keyboard လှလှ ​လေး​ဒွေ တင်​​ပေးလိုက်​တယ်​
Pauk Sa ကAndroid ကဏ္ဍ မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။ (12 hours ago)0Replies
+!!!★*♥SNOW HNINN!!★*♥!!!+ က အထွေထွေ ကဏ္ဍမှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပြန်စာ ကိုတော့မိုးလေး(ခ) လဲ့လဲ့ ရေးခဲ့ပါတယ်။ (16 hours ago)9Replies
facebook photo lock ​ဖြေနည်း
Pauk Sa က Android ကဏ္ဍမှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပြန်စာ ကိုတော့မိုးလေး(ခ) လဲ့လဲ့ ရေးခဲ့ပါတယ်။ (16 hours ago)9Replies
အသက် (၁၈) နှစ်အောက် မဖတ်သင့်သော ညစ်ပတ်သည့်ဇာတ်လမ်း
♥မြိုင်ရာဇာတွတ်ပီ♥ က ဟာသကဏ္ဍမှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပြန်စာ ကိုတော့မိုးလေး(ခ) လဲ့လဲ့ ရေးခဲ့ပါတယ်။ (16 hours ago) 15 Replies
fb နှင့်​ ပတ်​သက်​သမျ apk စုံ
Pauk Sa ကAndroid ကဏ္ဍ မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။ (မနေ့က)0Replies
Ctrl + Z ရဲ့ လျို့ဝှက်ချက်များ
မိုးသောက်ကြယ် က နည်းပညာကဏ္ဍမှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပြန်စာ ကိုတော့ξIm Free βσψ ζΘ ရေးခဲ့ပါတယ်။ (မနေ့က) 12 Replies
fb က comment ​ပေးထားတာတို့ fri add တာတို့ CB က message ပို့တာတို့ ​mail ထဲမဝင​အောင်​ပိတ်​နည်း
Pauk Sa က Android ကဏ္ဍမှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပြန်စာ ကိုတော့အဖြူရောင်နတ်သမီးလေး ရေးခဲ့ပါတယ်။ (မနေ့က) 1 Reply
ချစ်သူ က ကဗျာပျိုးခင်းမှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပြန်စာ ကိုတော့အဖြူရောင်နတ်သမီးလေး ရေးခဲ့ပါတယ်။ (မနေ့က)3Replies
ချစ်သူ က ကဗျာပျိုးခင်းမှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပြန်စာ ကိုတော့အဖြူရောင်နတ်သမီးလေး ရေးခဲ့ပါတယ်။ (မနေ့က)2Replies
အခြေခံကားမောင်းနည်း ( အစအဆုံးဖတ်စေချင်ပါသည်)
shweminntharlay က အထွေထွေ ကဏ္ဍမှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပြန်စာ ကိုတော့ထွန်း ရေးခဲ့ပါတယ်။ (တနင်္ဂနွေနေ့က) 13 Replies
shweminntharlay က ပရလောကနှင့် မှော်ပညာမှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပြန်စာ ကိုတော့ထွန်း ရေးခဲ့ပါတယ်။ (တနင်္ဂနွေနေ့က)7Replies
♥မြိုင်ရာဇာတွတ်ပီ♥ ကဟာသကဏ္ဍ မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။ (စနေနေ့က)0Replies
+!!!★*♥(အောင်ဖြိုးဇော်)♥*★!!!+ က အထွေထွေ ကဏ္ဍမှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပြန်စာ ကိုတော့+!!!^^YoonYoon^^!!!+ ရေးခဲ့ပါတယ်။ (စနေနေ့က)3Replies
ပိုက်ဆံမကုန်ပဲ ဖုန်း Free ခေါ် လို့ရမယ် ApK
လရိပ်ထိုက်တန် က အင်တာနက် ကဏ္ဍမှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပြန်စာ ကိုတော့1 ရေးခဲ့ပါတယ်။ (စနေနေ့က) 17 Replies
မြတ်နိုးခင် က ဗဟုသုတမှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပြန်စာ ကိုတော့1 ရေးခဲ့ပါတယ်။ (စနေနေ့က) 22 Replies
@@ ??? ''' ??? @@
1 က အထွေထွေ ကဏ္ဍမှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပြန်စာ ကိုတော့မဟော်မျိုးမင်းကို ရေးခဲ့ပါတယ်။ (စနေနေ့က) 1 Reply
အိုကေ နားထား ရှင်ဖုန်း +2015+မှာအချစ်​တတ်​ဆုံး​ယောင်္ကျား စီစဉ်ပါတယ်0Comments
Baby - Justin Bieber - Remix by Jordan Jansen & Emily Harder +*+*ပူတူတူး!!! စီစဉ်ပါတယ်0Comments
Phoe Kar - lan Kwel +*+*ပူတူတူး!!! စီစဉ်ပါတယ်0Comments
အလွယ်ဆုံး ပရဟိတစိတ် မွေးနည်း
FM ပရဟိတအဖွဲ့ (မန္တလေး) သတင်း
FM မီးထွန်းပွဲတော် ဓာတ်ပုံလေးတွေပါ
မန္တလေးဆေးရုံကြီးသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့သော အလှူမှတ်တမ်း
FM ပရဟိတအဖွဲ့ (ရန်ကုန်) သတင်း
FM ရန်ကုန်ပရဟိတအဖွဲ့၏ (၉-၁၀-၂၀၁၁)ရက်နေ့ ရွှေပြည်သာ ဘိုးဘွားရိပ်သာအလှူမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံလေးတွေပါ
FM မှ အရေးတကြီး ပြောချင်တာလေး
FM ပရဟိတအဖွဲ့ (မလေးရှား) သတင်း
FM ပရဟိတအဖွဲ့ (တောင်ကြီး) သတင်း
တောင်ကြီးပရဟိတ တွေ့ ဆုံပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ
2. facebook photo lock ​ဖြေနည်း
4. လားရှိုးမြို့က သရဲခြောက်တဲ့အိမ်
5. ဆားနဲ့ မှော်ပညာ
created this Ning Network. © 2014 Created by နောင်လတ်(မန်း). သင်္ကေတ | Report an Issue | Terms of Service